Halkan ka bilow!
Waxaan kugu soo dhaweynaynaa adiga iyo qoyskaaga Barnaamijka Hawaii WIC. Fadlan wac rugtaada WIC ee deegaankaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Miyaad dhibaatooyin ku qabtaa barnaamijka WICShopper? Email JPMA ugu dir WICShopper@jpma.com
Ma ku cusub tahay WIC? Fadlan hoos ka daawo fiidiyowga Hanuun WIC ee hoosta ku yaal!
Q: Ma inaan iibsadaa dhammaan cuntooyinka WIC?
A: Maya, looma baahna inaad iibsato dhammaan cuntooyinka WIC ee adiga lagu siiyay.
A: Dhowr bedel ayaa loo oggol yahay cuntooyinka qaarkood. La xiriir rugtaada WIC si aad ugala hadasho waxa kuu banaan iyo in jeegagaaga ama gargaaradaada la beddelo. Dukaanka wax beddel ah lagama sameyn karo. Waa inaad heshaa waxa ku daabacan jeega ama Liiska Faa'iidooyinka haddii aad doorato inaad iibsato cunnadaas adoo adeegsanaya jeegaggaaga WIC ama kaarka eWIC.
A: Cunnada WIC waxaa loogu talagalay kaliya shakhsiyaadka ka qeyb galaya Barnaamijka. Haddii kuwa gurigaaga ka tirsan ee qaata jeegagga WIC ama macaashka aysan cunin cunno ay bixiso WIC, weydii shaqaalaha rugtaada caafimaad haddii ay jirto beddelid la oggol yahay ama ha ka saarto jeegaggaaga ama macaashkaaga.
Q: Maxaad iiga sheegi kartaa naasnuujinta?
A: Naasnuujintu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad u qaban karto naftaada iyo ilmahaaga. Waa wax iska caadi ah hooyooyinka inay yeeshaan su'aalo badan oo ku saabsan naasnuujinta ama ay u baahan yihiin taageero dheeraad ah. Taasi waa ok! WIC waxay halkan u joogtaa inay ku caawiso. Xafiiskaaga WIC ee deegaankaaga ayaa leh takhasusleyaal naas nuujin ah oo diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalahaaga isla markaana ku siiyaan adeegyo kaa caawin kara inaad gaarto yoolalkaaga naas nuujinta. Kaliya weydii!
Waa kuwan qaar dheeri ah ihanaan iyo kheyraad in lagaa caawiyo in aad sii waddo naas nuujinta ka dib marka aad ku noqoto shaqada ama dugsiga.
Q: Miyaan ku heli karaa cuntada dabiiciga ah WIC?
A: Haa, waxaa jira dhowr cunnooyin WIC-ansixisay oo leh ikhtiyaarro dabiici ah. Xulashada dabiiciga ah ayaa lagu daray khudradda iyo khudradda cunnooyinka cunnooyinka; khudrad cusub, qabow, iyo qasacadaysan, soymilk, tofu, baastada qamadiga oo dhan, iyo digirta qasacadaysan. Noocyo iyo noocyo gaar ah, fadlan tixraac Liiska Cuntada WIC ee La Oggol yahay.
Q: Miyaan iibsan karaa siiriyaal bariis dhallaanka ah anfacaya WIC carruurtayda?
A: Maya. Badarka bariiska dhallaanka maahan cunto WIC ah oo la oggol yahay sababo la xiriira heerarka arsenic ee laga helay qaar ka mid ah waxyaabaha dalagga bariiska dhallaanka ah. Haddii aad leedahay badarka dhallaanka oo qayb ka ah dheefahaaga WIC, waxaad dooran kartaa boorashka dhallaanka, dalal badan, qamadi dhan, iyo badarka shaciir. Si aad wax badan uga ogaato arrintan, riix halkan.
Ha iloobin inaad soo qaadato jeegagaaga WIC ama kaarkaaga eWIC ee aad dukaanka la joogto!
Adeegso Liistada Cuntadaada ee ay ansaxisay Xaaladda Wicda ee WICShopper (ama nooca aad daabacan tahay) si aad u aragto cuntooyinka WIC ee aad iibsan karto.
Q: Waxaan iskaaniyay qaar ka mid ah cuntooyinka ama furaha ayaa galay nambarka UPC oo waxaan arkay farriimo kala duwan. Maxay uga jeedaan?
ALLOWED - Waxyaabahan waxaa loo oggol yahay Hawaii WIC oo aad leedahay faa'iidooyinka WIC si aad u iibsato shaygan!
FAA'IIDADA UGU FUDUD AH - Tani waa shey u qalma WIC, hase yeeshee MA Haysatid faa'iidooyinka aad ku iibsan karto. Ama laguuma qoondeynin dheefaha shaygan, ama aadan haysan waxtarro kugu filan oo hadhay oo aad ku iibsato.
MA AHA WIC ITIC - Taas macnaheedu waa WIC ma aysan ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awoodi doontid inaad cuntadaas ku iibsato faa'iidooyinka cuntada WIC noo soo sheeg adiga oo isticmaalaya "Anigu ma iibsan karno!" [HC (3) oo ku yaala appkan.
Lama ogaan karo - Tani macnaheedu waa sheygu kuma jiro liiska cuntada laakiin ma awoodno inaan ku xirno martigaliyaha WICShopper si aan u aragno haddii lagu daray maalmihii ugu dambeeyay. Waxay u badan tahay, tani maahan shey u qalma WIC.
A: Xaalado badan, WICShopper ma baari karo miraha iyo khudaarta darayga ah mararka qaarna dukaamada waxay adeegsadaan baakado u gaar ah oo aan ku jirin liiska alaabooyinka la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, dhan oo dhan, pre-cut, jeexan ama cabbir qaadasho shaqsiyeed oo aan lahayn soosas ama dhuuqmo ayaa loo oggol yahay Waxaa jira xeerar kale, sidaa darteed tixraac liiska cuntadaada ee barnaamijka si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
A: "Tani ma iibsan karto!”Wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u sheegto WIC markii shay aad cunto iibsaneyso lagu diido diiwaanka. Markaad isticmaaleyso "Tani ma iibsan karto!" barnaamijka WICShopper app, waxaan ka heli doonnaa ogeysiin xafiiska WIC State. Waxaan dib u fiirineynaa dhammaan waxyaabaha aad noo sheegto oo ku saabsan dukaamada si aan uga dhigno cunnooyin adiga kuu bannaan!
WIC Xuquuqda iyo Waajibaadka
Waan ku faraxsanahay inaan ku aragno WIC maanta oo ay ku faraxsan yihiin inay ku caawiyaan!
Waxaan xaq u leeyahay:
Hel jeegag si aad ugu iibsato cunto caafimaad leh. Waan ogahay in WIC aysan bixin dhammaan cuntooyinka aan u baahanahay.
Hel macluumaad ku saabsan cunno caafimaad leh iyo nolol firfircoon.
Helaan caawimaad iyo taageerid naas-nuujin.
Helo macluumaad ku saabsan tallaalada iyo adeegyada kale ee caafimaadka i caawimi kara.
Si cadaalad ah oo xushmad leh loola dhaqmo shaqaalaha WIC iyo shaqaalaha dukaanka. Haddii aan si cadaalad ah layla dhaqmin, waxaan la hadli karaa kormeeraha WIC. Waxaan weydiisan karaa agaasimaha WIC ama Xafiiska WIC ee gobolka shir ama dhageysi haddii aan ku raacsaneyn go'aamada la xiriira u qalmideyda.
Ilaalinta xuquuqda madaniga. Heerarka u-qalmitaanka Barnaamijka WIC waa isku mid dadka oo aan loo eegin jinsiyad, midab, asal waddan, jinsi, da 'ama naafonimo.
Asturnaanta. Nidaamka gaarka ah ee gaarka ah ee WIC waxaa laga helayaa xagga dambe ee foomkan.
Waxaan oggolahay inaan bixiyo macluumaad run ah oo dhammeystiran oo ku saabsan:
Dakhligayga. Waxaan shaqaalaha u sheegi doonaa dhammaan ilaha dakhliga ee gurigayga. Waxaan soo sheegi doonaa wixii isbedel ah.
Ka qaybgalkayga Medicaid, Lambarka Cuntada (SNAP), ama Barnaamijka Shaqaaleynta Qoyska (TANF). Waxaan WIC u ogaan doonaa WIC haddii aan joojiyo kaqeybgalka barnaamijka iga dhigtay inaan u qalmo WIC.
Xaaladdayda naas-nuujinta. Waxaan ku wargalin doonaa WIC haddii aan yareeyo ama joojiyo naas nuujinta.
Cinwaankayga. Waxaan ku soo wargalin doonaa isbeddelada cinwaankayga ama macluumaadka xiriirkayga. Waxaan codsan karaa Xaqiijinta Shahaadada (VOC) haddii aan ka guurayo gobolka. Tani waxay fududeyn doontaa helitaanka WIC ee gobolka cusub.
Waan oggolahay inaan raaco shuruucda. Waxaan:
Ula shaqee shaqaalaha rugta caafimaadka iyo shaqaalaha oo ixtiraam leh. Ma dhegi doono, qaylin doono, hanjabayaan ama qofna wax uma yeeli doono.
U isticmaal cuntooyinka WIC ee kaliya ee qofka magaciisu ku jiro jeegaga.
Soo celi cuntada dheeraadka ah ee aanan u isticmaali karin rugta caafimaadka.
Weligaa ha u bandhigin inaad iibiso, wax bixiso, ama ka ganacsato cuntooyinkayga WIC ama jeegaga. Tan waxaa ka mid ah in lagu dhajiyo internetka, ama lagu celiyo dukaanka. Cunto kasta oo aan bixiyo si aan u iibiyo ama aan u bixiyo taasoo la mid ah cuntada WIC ee aan helay waxaa loo qaadan doonaa inay tahay cuntada WIC. Waxaa la i weydiin doonaa inaan dib u bixiyo barnaamijka cuntada.
Isticmaal jeeggeyga bilo saxda ah oo lagu daabacay jeegga.
Ka qaado hal keli kaliya hal xarun WIC ah bishiiba. Waxaan fahamsanahay in ka-qaybgalka labaduba sharci darro yahay.
Hayso balamaha ama wac bukaan-socodka si aad u ballansato. Anigu waan fahamsanahay in barnaamijka laga saari karo haddii aanan soo qaadin jeeggeyga laba bilood oo isku xiga.
Soo qaado baqshadeyda aqoonsiga WIC markaan tago rugta caafimaadka ama aan ku iibiyo dukaamada WIC.
Badbaadinta WIC-da aan u eego sida lacag caddaan ah, iyaga oo ka ilaalinaysa inay lumaan, la xado ama la burburiyo.
U sheeg shaqaalaha WIC haddii jeegaga lumo ama la xado. Anigu ma isticmaali doono jeegaga aan soo sheegey sida lumay.
Iibso kaliya cuntooyinka ku qoran jeeggeyga iyo buugga Buugaagta Cunnada ee loo idmaday Hawaii WIC.
Isma bedelin isbeddelkayga.
Saxeex jeeggeyga ka dib markii qiimaha iibka saxda ah ee ay soo buuxiyeen dukaanka.
Raac xeerarka iyo tilmaamaha ku qoran Buug-yaraha Cunnada ee La Oggolaaday ee Hawaii WIC.
Waxaan akhriyey ama loo sheegay xuquuqdayda iyo masuuliyadayda (ku daabacay dhinaca hore). Waan ogahay haddii aanan raacin mas'uuliyadahaas, waxaa laga yaabaa inaan i weydiisto inaan dib u bixiyo kaalmooyinka ama aniga ama caruurtayda laga saari karo barnaamijka WIC.
Shahaadadani waxaa lagu sameeyaa isticmaalka miisaaniyada federaalka. Waxaan cadeynayaa in macluumaadka aan bixiyay ay sax yihiin sida ugu fiicnayd aqoonteyda. Shaqaalaha barnaamijka ayaa hubin kara dhammaan macluumaadka aan siiyay xarunta caafimaadka. Waxaan ogsoonahay in wax kasta oo aan runta sheegin ama aan si ula kac ah u helin waxtarka cuntada (tusaale ahaan: samaynta war been ah ama marin habaabin ah ama been abuur ah, qarinta, ama haynta xaqiiqda) waxay keeni kartaa in aan bixiyo bixinta hay'adda gobolka qiimaha cuntada si khalad ah ayaa la i siiyay, waxaana laga yaabaa in aniga lakulmayo dacwad madani ama dembiile ah sida waafaqsan sharciga Gobolka iyo Federaalka.
Haddii aan doortay inaan wakiil ka noqdo wakiil, isaga / iyada ayaa qaadi kara oo dib u soo ceshan karaa jeegaga WIC aniga. Wakiilkeyga ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ilmahayga u geeyo rugta caafimaad haddii booqashada booqashada loo baahan yahay si ay u yeeshaan dhererkooda iyo miisaankooda la baaray, iyo / ama dhiig lagu baaro dhuxul yar. Waan fahamsanahay in aan masuul ka ahay falalka wakiilkayga. Waa inaan weydiistaa wakiilkeyga macluumaad kasta ama ogaysiisyada la siiyay iyaga. Anigu waxaan fahamsanahay inaan ansaxiyay, ama ansaxiye dheeraad ah oo aan ku qeexay, waa in ay joogaan ballamaha shahaadaynta.
Siyaasadda Khaaska ah ee WIC:
WIC waxay xushmeyneysaa xuquuqdaada asturnaanta. Ka qaybgalayaasha WIC, waxaad heli kartaa farriimaha qoraalka xusuusin ah, wicitaano taleefan, waraaqo, kaararka boostada, ama emayl. Waxaad codsan kartaa inaadan helin xusuusiyeyaashaas.
Macluumaadka ku saabsan kaqeybgalkaaga barnaamijka WIC waxaa loo wadaagi karaa ujeedooyin aan ahayn WIC barnaamijyada kale ee caafimaadka iyo nafaqada ee u adeega dadka u qalma barnaamijka WIC. Agaasimaha fulinta ee Waaxda Caafimaadka ee Hawaii ayaa oggolaaday shaacinta iyo adeegsiga macluumaadka WIC ee qarsoodiga ah ee barnaamijyada qaar si loo arko inaad u qalanto adeegyadooda; si loo sameeyo wacyi-gelin; in lala wadaago macluumaadka caafimaad ee loo baahan yahay barnaamijyada aad horeyba uga qaybqaadanayso; si loo muujiyo habraacyada maamul ee u dhexeeya barnaamijyada; iyo in laga caawiyo qiimeynta caafimaadka guud ee qoysaska Hawaii iyada oo loo marayo warbixinno iyo daraasado. Waxaad waydiin kartaa shaqaalaha WIC macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijyadan.